Ciidamada Booliiska Baydhabo oo toogasho geystay xaley – Radio Baidoa
Ciidamada Booliiska Baydhabo oo toogasho geystay xaley
By Webmaster	 On Jun 21, 2018
Ciidamada Booliska maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan kuwa ammaanka ayaa xalay fiidkii waxa ay xaafadda Silliga ee magaaladaasi ku toogteen nin ay wada murmeen, sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ammaanka qaabilsan.
Dhacdadan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidan hubeysan gurigiisa ugu tageen nin ay ka shakiyeen, kadibna ay ku amreen inuu u raaco saldhigga Booliska, balse ninkaasi ayaa ka biyo diiday oo amar adeeg sameeyay.
Cidankii ayaa intaasi kadib wacday gawaari ciidan oo isku dayay in ay xoog ku soo kaxeeyaan ninkan oo garab ka caawimaad ah ka helay qoyskiisa iyo dadka deriska ah.
ilo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in halkaasi uu labadan dhinac ku dhexmaray muran gacan ka hadal ah, waxaana intaasi kadib ciidanka oo adeegsanaya awood Millatari ay fureen rasaas, taasi oo sababtay in halkaasi uu ku geeriyoodo ninkaasi, sidoo kalena ay dhaawacmaan hooyada dhashay ninkaasi iyo qof ka mid ah dadka deriska.
Ciidamada ayaa goor dambe oo xalay ah ka soo tagay gurigaasi, dhacdadan ayaa waxaa si aad ah u hadal haya dadka deegaanka, oo la yaaban sida ay wax u dhaceen.
Maamulka degmada Baydhabo iyo saraakiil ciidan ayaa ku baxay falkan waxayna baaritaan ku sameynayaan sida ay wax u dhaceen, xiriir aan la sameynay waxay inoo sheegeen in ay dib ka bixin doonaan faah faahinta la xiriirta dhacdadan
Trump oo ka noqday go’aankii carruurta iyo waalidiintooda lagu kala reebayay